Symlink: chii icho uye mashandisiro ayo muLinux kubatanidza mafaera nemaforodha | Linux Vakapindwa muropa
Mawindo mapfupi ehusiku kwandiri. Anenge chero application yaunoisa inoisa imwe pakombuta yako nekutadza. Ini pachangu, pese panoitika izvi ndinozvikanda marara, kunyangwe kuiswa kusati kwapera. Ini ndoda desktop yangu yakachena, ndichingoisiya nemifananidzo yakawanda ini ndichiita basa. Asi haasi mapfupi ese akaipa, uye muLinux mune zvekufananidza zvinongedzo kana Symlink izvo ini ndave kutoda zvimwe.
Kune kutanga, izvi zvinongedzo hazvina kugadzirwa zvega uye hazvisi zvese zvakazadzwa nazvo. Kuenderera mberi, zvinogona kutishandira izvo zvaunoona mukutora: batanidzo Zvese zviri mukati meiyo midhiya dhairekitori kune yako wega folda. Nenzira iyi, software senge VLC inongofanirwa kutarisa mune yekutanga folda kuti uwane zvirimo uye ichave ingangoita zana% zvakafanana. Uye ndeyekuti VLC haitenderi kuwedzera imwe nzira yekuraibhurari; iwe unofanirwa kuiita iratidze yako Multimedia Library, chimwe chinhu chisina kufanana uye, zvirinani izvozvi, hachiwanikwe muVLC 100 beta.
1 Nzira yekugadzira Symlink
2 Zvimwe zvinoshandiswa
3 Speed, yako inogona Achilles chitsitsinho
Nzira yekugadzira Symlink
Kugadzira Symlink, zvakanak kuzviita pamwe neiyo terminal. Kune mamaneja emafaira anozviita ne graphical interface, asi izvo zvinongove zvakanaka kwatiri kuti tigadzire chinongedzo kune imwe neimwe nguva. Kubva kumagumo tinogona kudhonza zvemukati mefaira rese. Iwo wekuraira ungave unotevera:
Chinhu chakanaka ndechekuti terminal inotibvumidza kudhonza maforodha mukati. Muenzaniso wekugadzira iyo Symlink kune folda ichave ln -s '/ media / pablinux / Dhata / Music / Zvese zvasara' / imba / pablinux / Mumhanzi, wekutanga ane makotesheni nekuti ndazvuva. Rairo randakashandisa kuisa dambarefu rese remumhanzi "rakareba" zvishoma:
Kuti usarudze zvese zvirimo muhwindo, zvinonyanya kuitika muLinux ndeye Dhinda Ctrl + A, asi zvinokwanisika kuti mumwe maneja wefaira anoshandisa mubatanidzwa Ctrl + E. Kana zvese zvasarudzwa, tinozvidhonza kuenda kuchiteshi, kuratidza nzira yekuenda uye tinya Enter.
Izvi zvinogona kutibatsirawo ku "isa" mamwe mafaera mu / bin folda, kunyanya zvimwe zvatinozoshandisa neiyo terminal. Semuenzaniso, tinogona kuisa akati wandei sarudzo dze youtube-dl, asi chete iyo yakapihwa mu website yepamutemo uye izvo zveGitHub yako. Pakarepo mushure meiyo yatakaisa yakagadziridzwa nemirairo Pip, asi kuti tishandise isu tinofanirwa kuisa iyo package python3-pombi uye iwo murairo wekugadzirisa iwo mapakeji yakati rebei. Muzviitiko izvi ini ndoda kurodha faira rekutanga. Kugadziridza kana isu tikasarudza iyi sarudzo yakapusa sekunyora youtube-dl -U, zvirinyore kurangarira panguva yacho ngatione kuti inoshanda zvisingaite.
Kugadzira Symlink mu / bin isu tichave nechokwadi chekuti iyo terminal inogona kuivhura chero iri. Zvikasadaro, isu hatizokwanise kuivhura uye isu tichafanirwa kudhonza iyo faira kuenda kune iyo terminal pamberi penzvimbo yekurodha pasi. Izvi, kuzvidhonza kuenda kuchiteshi, ndechimwe chinhu chatinofanira kuita kana tichida kuchigadzirisa, nekuti kana tango chiisa mu / bin folda inotipa kukanganisa. Ini ndoda kusimbisa izvo kuisa zvinoitwa mu / bin dhairekitori kunogona kuva nengozi uye zvinokurudzirwa chete kana iwe uchivimba neanogadzira 100% .
Speed, yako inogona Achilles chitsitsinho
Asi hazvisi zvese zvakakwana. Panogona kunge paine akati wandei matambudziko zvinoenderana nekwakabva chinongedzo. Kana isu tiri kubatanidza kune iyo HDD chikamu cheiyo hybrid disc, hapana mutsauko chaiwo unoonekwa. Zvino, mamwe maLinux anoshanda masystem haakwiri chikamu ichi otomatiki, uye icho chinhu chatinofanira kugadzirisa kubva pazviruva. Iwo matambudziko anowedzera kana diski iri yekunze kana imwe isina waya. Kutanga, mune dzimwe nguva iwe unofanirwa kuiisa nemaoko, uye chechipiri, iwe uchaona kuti inotakura mafaera. Inogona kuva masekondi 2-3 bhaisikopo, asi chiri chinhu chinofanira kutaurwa.
Chero uye uye kupi iko kwepakutanga faira iri, akananga maratidziro kana, mune ino kesi, Symlink inogona kubatsira zvakanyanya uye, uchiziva kuti havagari chinhuIvo vakakoshesa.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » GNU/Linux » Sisitimu Yekutonga » Maitiro ekugadzira zvinongedzo kumafaira kana maforodha (Symlink) muLinux